Barlamaanka Dalka Ethiopia oo Ansixiyey in Xaalad Deg Deg ah Dalka La Geliyo Muddo Lix Bilood ah.
Kulan ay maanta isugu yimaadeen golaha Baarlamaanka Itoobiya ayaa waxaa lagu ansixiyay bayaanka xaaladda deg degga ah ee dalka lagu soo rogayo, taas oo dhawaan ay ku dhawaaqeen golaha wasiirada ee Itoobiya. Ansixinta xaaladda deg degga ah ee lagu soo rogay dalka Itoobiya ayaa ka dhigan in si buuxda u...
Dalka Kenya Taliyaha Difaaca oo Sheegay In ay Lagama Maarmaan Tahey in Xal Laga Gaaro Xuduuda Kala Qeybisa Labada Dal.
Taliyaha Ciidanka Difaaca Kenya (KDF), Jeneraal Robert Kibochi ayaa sheegay in Kenya iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xuduud wadaag ah, sidaas darteedna loo baahan yahay in si wadajir ah xal loogu helo muranka ka dhaxeeya. "Soomaaliya iyo Kenya waa deris, waxaa loo baahan yahay in aan ku heshiinno inaan ku...
Golaha Hawl Fulinta Dawlad Deegaanka Soomaalida oo War Saxaafadeed Kasoo Saarey Aayaha Dhulka ismaamulka Soomaalida.
Guddida fulinta ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya oo maanta yeeshay kulan degdeg ah, ayaa waxay soo saareen War-saxaafadeed lagaga hadlayay qodobo muhiim u ah shacabka dowlad degaanka Soomaalida. Haddaba War saxaafadeedkan oo dheeraa ayaa ugu horeyn lagaga hadlay dhibkii ay kooxda TPLF ugaysatay shacabka dowlad degaanka Soomaalida mudadii ay xilka...
R/wasaaraha Ethiopia oo Sheegay In Dagaalkii Wallo ay ka Qeyb Qaateen Ciidamo Caddaan iyo Madow Isugu Jira.
Ra'iisal wasaaraha Itoobiya Abiyi Axmed ayaa mar uu kulan u qabtay maamulka sare ee xukuumaddiisa, waxaa uu sheegay in dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Wallo ee dowlad degaanka Axmaarada, ay ka qayb qaateen ciidamo aan Itoobiya u dhalan oo caddaan iyo madaw isugu jira. Abiyi Axmed ayaa sidoo kale sheegay...
Maxkamad Ku Taal Dalka Kenya oo Siidaysey Xubin Ka Tirsanaa Ururka Al-shabaab una Xidhnaa Dilal La Geystey.
Dowladda Kenya ayaa xabsiga ka siidaysay Ninka u dhashay dalkeeda oo masuul ka ahaa weerar lagu dilay 11 qof oo ka dhacay saldhigga basaska ee Machakos Country, ee Nairobi. Maxkamad ku taal magaalada Nairobi ayaa Elgiva Bwire Oliacha, waxay sannadkii 2011 ku xukuntay xabsi daa’in, isagoo la sheegay inuu katirsanaa...
Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida ee Dalka Zambia oo ka Hadley Ganacsato Lagu Xirey Dalkaasi.
Ciidamada Booliiska wadanka Zambia ayaa shalay xabsiga u taxaabay boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo ku nool caasimada labaad ee dalkaasi Ndola Xili ay kasoo baxeen Saaladii Jimcaha. Dadkan Soomaaliyeed ee Booliiska dalkaasi ay Masajidka ka hor qabqabteen ayaa waxay isugu geeyeen garoon lagu ciyaaro kubada cagta oo ku yaala magaaladaasi. Guddoomiyaha...
Axmed Xuseen Somali Canadian ah oo Markii Afaraad Wasiir Loo Magacaabey iyo Xilka Loo Dhiibey.
Raysal wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay golahiisa wasiirada oo ka kooban 38 wasiir oo kala bar ay dumar yihiin. Golaha wasiirada ee uu magacaabay raysal wasaaraha dalka Canada waxaa markii sadaxaad kasoo dhex muuqday Axmed Xuseen Axmed oo Soomaali Canadain ah, kaasoo loo magacaabay wasiirka Guryenta kala...
Qarax ka Dhacey Magaalada Kampala ee Dalka Uganda oo ay ku Dhinteen Labo Qofood.
Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen ka dib markii uu qarax Sabtidii xalay ka dhacay maqaayad caan ah oo ku taalla duleedka caasimadda Uganda ee Kampala. Sida uu Boolisku sheegay, qaraxu wuxuu ka dhacay abaarihii 9 -kii fiidnimo ee xilliga bandowga, goob wax lagu...
Maleeshiyaad Ka Tirsan Xoogagga Xuutiyiinta Oo Lagu Dilay Dagaal Wali Ka Socda Gobolka Ma’rib.
Waxaa wali socda dagaallada gobolka Ma’rib ee dalka Yemen kuwaasoo u dhaxeeya ciidamada dowlada uu caalamka aqoonsanyahay ee yaman oo gacan ka helaya isbaheysiga uu xulufada ka yahaysacuudiga. Dagaalkaasi kuwoodii ugu danbeeyana waxaa la sheegayaa in tobaneeyo ka tirsan xoogagga Xuutiyiinta lagu dilay weerar ay qaadeen ciidamda ay taageerayaan dowladaha...